स्वास्थ्यमा ‘विदेश भ्रमण’ हेर्ने महाशाखा नेतृत्व सधैँ अस्थिर – Health Post Nepal
स्वास्थ्यमा ‘विदेश भ्रमण’ हेर्ने महाशाखा नेतृत्व सधैँ अस्थिर
२०७५ भदौ ३० गते १९:५६
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा २ महिनाअघि मात्रै आफैँले निर्देशक बनाएका मोहम्मद दाउदलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा गरे ।दाउदको ठाउँमा १ साउनमै प्रदेश ३ को निर्देशकमा सरुवा गरेर करिब २ सातादेखि मन्त्रालयमै हाजिर हुँदै आएका महेन्द्र श्रेष्ठले सो महाशाखाको जिम्मेवारी पाए ।
दाउदले जिम्मेवारी पाएको विभागको महाशाखामा कार्यरत रमेशप्रसाद अधिकारी मन्त्रालयमा तानिएका छन् । वैदेशिक भ्रमणदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय राख्ने जिम्मेवारी तोकिएको यो महाशाखाको नेतृत्व यति अस्थिर भएको पहिलोपटक भने होइन ।
१ साउनमा मन्त्रालयको नयाँ संरचना स्वीकृत नहुँदासम्म विदेश भ्रमण र दातृनिकायसँगको समन्वयको जिम्मेवारी नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाको थियो । सोही महाशाखा हुँदादेखि नै यसको नेतृत्व अस्थिर हुँदै आएको छ ।
०७२ यता मात्रै वैदेशिक समन्वय हेर्ने यो महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर भएको यो छैटौँपटक हो । यसबीचमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ६ जना मन्त्रीले सम्हाले । नयाँ संरचनामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र नीति, योजना तथा अनुगमन हेर्ने छुट्टाछुट्टै महाशाखा बने । सँगै नीति, योजना तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखामा रहेको ‘अस्थिर नेतृत्व’को रोग समन्वय महाशाखामा पनि सरेको छ ।
महाशाखामा रहेर काम गरेपछि अवकाशप्राप्त जीवनमा समेत दातृनिकायसँगको सम्बन्ध र महाशाखाको कामले परामर्श सेवा र अन्य अवसर मिल्ने भएकाले जनस्वास्थ्य प्रशासक र चिकित्सक यो महाशाखामा जान मरिहत्य गर्छन्
ठूलो संख्यामा छात्रवृत्ति र विदेश भ्रमणका अवसर आउने स्वास्थ्यमा त्यसको गोपनीयता र पकड राख्नकै लागि पनि मन्त्रीहरु सबैभन्दा विश्वासपात्रलाई यो महाशाखामा राख्न रुचाउँछन् । त्यति मात्र होइन, यो महाशाखामा रहेर काम गरेपछि अवकाशप्राप्त जीवनमा समेत दातृनिकायसँगको सम्बन्ध र महाशाखाको कामले परामर्श सेवा र अन्य अवसर मिल्ने भएकाले जनस्वास्थ्य प्रशासक र चिकित्सक यो महाशाखामा जान मरिहत्य गर्छन्
यसअघि महाशाखामा नीतिसमेतको जिम्मेवारी हुँदा पनि यो नै मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक महाशाखा मानिन्थ्यो । अहिले स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय, प्रदेश र आन्तरिक समन्वयलगायत जिम्मेवारी परेका छन् । लामो समय नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा सम्हालेका डा. पदमबहादुर चन्दको शब्दमा पहिले देखि नै नीति र वैदेशिक समन्वयको जिम्मेवारी पाएको महाशाखाको आकर्षण विदेश भ्रमणमा मात्र सीमित गराइएको छ । मन्त्रीहरुले आफ्नै सल्लाहकार बोर्ड बनाएर नीति बनाउने र महाशाखालाई विदेश भ्रमणमा आफूले चाहेको मान्छे पठाउनका लागि टिप्पणी उठाउने काममा मात्रै सीमित गरेका छन् ।
महाशाखाका पूर्वप्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले नीति, योजना, बजेट बाँडफाँड र विदेश भ्रमणको समेत जिम्मेवारी भए पनि लगातारको परिवर्तनले ठोस काम गर्ने अवस्था नै नरहने बताए । डोटेलले नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वय गर्ने काम र ठाउँमा अस्थिर नेतृत्व हुँदा पोलिसीमै समस्या पर्ने गरेको बताए । अर्का पूर्वप्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीले पोलिसी बुझेर बनाउँछु र काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई टिक्नै नदिने प्रवृत्तिले देशकै बेइज्जत भएको बताए ।
श्रेष्ठपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी गगन थापाले सम्हाले । थापाले भदौमा मन्त्री भए पनि कात्तिकसम्म विभाग र महाशाखामा कुनै सरुवा गरेनन् । थापाले पनि सुरुमा सोही महाशाखामा श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर भोगेन्द्र डोटेललाई प्रमुख बनाए ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे प्रमुख
पुरानो संरचनामा नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखामा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका चिकित्सकहरु मात्रै निर्देशक हुने परम्परा थियो । त्यसलाई तोडेर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ०७२ मा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका महेन्द्र श्रेष्ठलाई महाशाखा प्रमुखको कामकाज गर्ने गरी तोके । अधिकारीले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिँदा लामो समय स्वास्थ्य सेवा र मन्त्रालयमै बिताएका डा. पदमबहादुर चन्दबाट जिम्मेवारी खोसेका थिए । श्रेष्ठले ०७२ वैशाखदेखि ०७३ कात्तिकसम्म झन्डै डेढ वर्ष महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाले । बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामजनम चौधरीले पाए पनि श्रेष्ठलाई छुन सकेनन् ।
श्रेष्ठपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी गगन थापाले सम्हाले । थापाले भदौमा मन्त्री भए पनि कात्तिकसम्म विभाग र महाशाखामा कुनै सरुवा गरेनन् । थापाले पनि सुरुमा सोही महाशाखामा श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर भोगेन्द्र डोटेललाई प्रमुख बनाए ।थापा हटेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी गिरिराजमणि पोखरेलले सम्होले । पोखरेलले केही साताभित्रै डोटेललाई हटाएर वीर अस्पतालका अर्थोपेडिक्स डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई महाशाखा प्रमुख बनाए । पछि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल आइन् । उनले पुनः श्रेष्ठलाई नै महाशाखाको जिम्मेवारी दिएर गिरीलाई बिमा बोर्डको निर्देशक बनाइन् । डा. गिरी बिमा जान नमानेर वीर फर्के ।
पछिल्लो समय फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । उनले पुरानो महाशाखाबाट बनेका दुई महाशाखामध्ये समन्वयमा दाउदलाई ल्याए भने नीति, योजना तथा अनुगमनमा डा. विकास देवकोटलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रेष्ठलाई भने उनले प्रदेश निर्देशनालयमा पठाए पनि उतै रोक्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसँग बलियो सम्बन्ध रहेकै कारण श्रेष्ठ प्रदेश निर्देशनालयमा हाजिर मात्रै गरेर मन्त्रालय तानिएका थिए । पछिल्लो समय दाउदको सरुवा हुनुमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीसँगको उनको खटपट र प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबले काम गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेतृत्व परिवर्तनको शृंखला
०७२ अघि – डा. पदमबहादुर चन्द
०७३ वैशाख – महेन्द्र श्रेष्ठ
०७३ कात्तिक – भोगेन्द्र डोटेल
०७४ जेठ डा. – श्रीकृष्ण गिरी
०७४ चैत – महेन्द्र श्रेष्ठ
०७५ साउन – मोहम्मद दाउद
०७५ भदौ २९ – महेन्द्र श्रेष्ठ